Dawladdaha Hoose ee Soomalilaan | ToggaHerer
← Daawo: Haweenka Koonfurta Hargaysa Ee Taageera Xisbiga Wadani oo Taageeray Mawqifkii Xisbigooda ee 18 May iyo xusideeda
Dacwo: Gabay ku socda Colaada Ceel-afweyn.. W/T: SCC. Kalshaale →
Dawladdaha Hoose ee Soomalilaan
Muwaadin aqoon intee le,eg baad u leedahay dawladda hoose ee degmadaada? Waa maxay xidhiidhka idinka dhexeeyaa? Waa maxey waajibaadka ay tahey iney kasoo baxaan xildhibaanada dawladda hoose ee Degmadaadu? Maxaa adiga kugu waajib ah si ay u shaqeyso dawladda Hoose ee magaaladaadu? Ma taqaanaa shaqada Duqa(Mayor)/ku xigeenkiisa, Xoghayhaha, Guddiga fulinta, Guddiga Joogtada ah & guud ahaanba xildhibaanada Gollaha Deegaanku? Ma taqaanaa adeegyada loo baahan yahay inay qabato dawladda hoose ee Degmadaadu? Haddii aad saluugto wax qabadka xildhibaanadii aad soo dooratey awoodaada maku kala diri kartaa? Wali ina dib ma u eegtay xeerarka la xidhiidha Dawladaha Hoose si cilmiyeysana ma ugu dabaqday waaqaca jira? Horumar intee le,eg bay ku talaabsatey degmadaadu tobankii (10) sanadood ee u danbeeyay?
1. Mudanaha la doortay waxaa ku waajibay u feejignaanta iyo la socodka baahida iyo tabashada dadweynaha, Xilna ka saaran yahay inuu u soo gudbiyo Golaha Deegaanka ee uu ka tirsan yahay
2. Wacyigelinta iyo xidhiidhinta dadweynaha asaga oo ku hanuuninaya kaalinta ay kaga jiraan horumarinta Deegaankooda.
1. Mudanuhu, wuxuu bil gudaheed marka la doorto, ku diiwaangelinayaa hantida uu leeyahay mood iyo noolba.
2. Xoghayaha Fulintu wuxuu samaynayaa, ilaalinayaa, kaydinayaa diiwaanka hantida mudanayaasha.
11. Haddii uu la yimaado anshax xumo diineed ama mid dhaqan
3. Marka Guddi qaran oo gaara ah oo madax banana oo madaxweynuhu u magacaabay xilka kala diridda ay soo baadhaan gefafka dhacay ee lidka ku ah xilgudashadooda warbixin iyo talooyin cadna ka keenaan.
6. Marka Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Guduhu uu ku qanco, hubiyana xaqiijinta inay jebiyeen ama ay ku sifoobeen Arrimaha ku xusan Qodobkan Ee sababta kala dirida Golaha, wuxuu Wasiirku Awood u leeyahay, in uu soo jeediyo kala dirida Golaha, una gudbiyo Madaxweynaha oo leh Awoodda kama dambaysta ah ee kala diridooda, iyada oo loo marayo maxakammadda awooda u leh kala diridooda ee Heer gobol.
Sawiradana waa sawiro laga qaadey laamayada magaalada Hargeysa. Ishaa macalina!